အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: 2007
ပြောချင်ရင် ပြော၊ ဆိုချင်ရာ ဆို
သွားလိုရာ သွား။ လာချင်ရာ လာ
လုပ်ချင်ရာ လုပ်။ နေချင်ရာ နေ။
ရေးချင်ရာ ရေး၊ တွေးချင်ရာ တွေး
လူ့ အုပ်စုပြုရေး၊ ဒီမွေးရာပါအခွင့်အရေး၊
အများသဘောတူ ။ ညှိနှိုင်းယူ
လူရဲ့ အသက်။ ယော်သစ်ရွက်။
တစ်ရက် နဲ့ တစ်ရက်
သက်ဆိုး ဆက် ဆက်ရှည်။
ကြာလေ ကြာလေ ပိုဆိုးလေ။
ချစ်သောအမိမြေ။ ငိုကြွေး ရင်ကွဲကြေ။
သူလုပ်သမျှဘဲကောင်း။ တခြားလူက တိုင်းပြည်ရောင်း မတဲ့။
သူပြောသမျှဘဲ မှန်ကန်။ တခြားသူလုပ်က ပျက်သုန်းရန် တဲ့။
သူတို့ ကဘဲမျိုးချစ်။ တခြားလူက အနောက်ချစ် သတဲ့။
သူတို့ ကဘဲသံဃာစစ်။ တခြားလူက သူပုန်ဖြစ် သတဲ့။
သူတို့ ဘဲ လူတတ်ပများ။ တခြားလူကျ ခွေးဝဲစား
ငါက လွဲရင် ဖွဲ ဆန်ကွဲ။ လုပ်တာကြလည်း..XX တလွဲ။
မြေမထိကြွ ခြေထောက်။ ရူးသွပ်နေတဲ့ ဦးဏှောက်။
အရှက်မရှိတဲ့ စိတ်ဓါတ်။ ပြန်ပြောမဲ့သူ ပစ်မှတ်။
မဲမဲမြင်ရာ ဖမ်းသတ်။ တပြည်လုံး မသေမချင်းသူမရပ်။
မိသားစုကွဲ။ အမေ အဖေတကွဲ။
သာသနာ့ ၀တ္တကမြေ။ ဘုံလှုထားတဲ့ မြင့်မြတ်မြေ
အတင်းသော့ ခတ်သိမ်း။ အယူတိမ်းတဲ့ နအဖ
AIDS ရောဂါသည် လည်း မြေမရ။
၀ါတော် ရှစ်ဆယ် ဘုန်းကြီးတောင်နှင်ချ
သူတောင်းစား လုပ်ခိုင်းတဲ့ စိတ်ဓါတ်။
မြန်မြန် သာ ငရဲလားကြပါစေ။
ဖမ်းချုပ်ထားသူတွေ၊ ခု ဘယ်မလဲ။
အသက်နဲ့ ခန္ဓာကွဲ။ ဒင်းတို့ က ဆက်လိမ်ညာဆဲ
ဦးဂမ္ဘီရရဲ့ ခမည်းတော်၊ တောင်နံရံဖေါက် ။
တန်ခိုးသိဒ္ဓိကြောင့်၊ အရည်ပျော် လူပျောက်။
အမြင်ကပ်ရင် လိုက်ဆွဲ။ ပုဒ်မ မထပ်တရားစွဲ
ရှိသမျှ အချုပ်ထဲမှာဘဲ ။
ဟဲ့ .. ဒါ ဘာစစ်အစိုးရလည်း။
အိုးစားခွဲပေးဖို့ဒို့ အချိန်တန်။
အိုးအိမ်နဲ့ အသက်။ မလုံခြုံမှ
လူ့ ဘ၀က ဘာပါလဲ။
ကိုိယ့် မိသားစုနဲ့ ၊ ကိုယ်နေထိုင်။
အခြေခံ ရရှိခွင့်မှမရှိ။ လူဖြစ်သော်လည်း
အို ထလော့ မြန်မာ။
အို နိုးကြားလော့ မြန်မာ။
အို ညီညွတ်လော့ မြန်မာ။
နူရာ ပို ၀ဲ စွဲမယ်။
ကျောင်းမှန်း ကန်မှန်းပြ။ တော်လှန်ကြစို့ ရဲ့
ဒို့ အားလုံး အလုပ်ကြရအောင်။
ဒီ ကမ္ဘာပေါ် ဗမာမြေ မပျောက်စေချင်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 10:26 PM0comments
လိုချင်ရင်..တကယ်လုပ်ကြ။ တကယ်လုပ်မှ ရမယ်။
ပါကေစ္စတန်က၊ မူရှာရက် ကမှ၊
ရာဇပုလ္လင်ကော်သုတ်၊ ဖင်နဲ့ ကပ်ထားသူ။
ထွက်နေတဲ့၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ သိုက်။
ဒို့ တတွေ လှုပ်ရှားမှ ဖြစ်မယ်။
တိုးတက်လာတာ၊ မင်းတို့ ဘဏ်စာရင်း။
ဟာ ဟာ့ ၊
ရွှေပြည်တော်ရယ် မျှော်တိုင်း ဝေးဝေး။
မပေးချင်လို ၊့ ဆင်ခြေဆင်လက်ပေး၊
သေချာချင့် တွေး။ မင်းတို့ နောင်ရေး။
စစ်သားဘယ်သူ။ ဒို့ တတွေသိ
ဒို့ မှာ.( ၅၀%) နိုင်ချေရှိ။
ဘယ်သူ စီးပွါး မြဲသလည်း။
ဘိုးဘွား အ်ိမ်ယာဂရံ လည်း မမြဲ ။
အစိုးရရုံး များ၊ လေလံတင်ပွဲ။
တွေ့ သမျှလူ၊ ပေါ်တာဆွဲ။
သူခိုး၊ ဒါးပြ ထက်ဆိုးတဲ့အစိုးရ။
ကိုယ့်အသက်တောင်။ ဖက်နဲ့ ထုတ်ထား၊
ဒီလိုသာ.ခန္တီစပါရမီ၊ များများသာထား၊
ဒင်းတို့ ဆက်လက်၊ လက်ခမောင်းခတ်သွား၊
လူမိုက်တွေ စိမ်ခေါ်၊ လေကျယ်နိူင်အား။
ဒို့ တတွေရဲ့ မနက်ဖြန်.
မလှုပ်၊ မပြုတ်၊ တုန်လှီိဘာဝေ၊
ဒို့ အနာဂတ်တွေ.တဖြေးဖြး စုတ်ပြဲနေရ၊
ကြောက်သလား။ ရွံ့ သလား၊
"တော်လှန်ရေး ။ တော်လှန်ရေး။"
ဟစ်ကြွေးရင်း ။ ဒို့ ပျောက်ကျား
အသက်ချွေး။ စတေးစို့ လား။
တစ်ကောင်ချင်း စီ ရှင်းထား။
တနေ့ နေ့ တချိန်ချိန်။ ဒင်းတို့ ရောင်ရှိန်
မလျှော့ ဇွဲနဘဲ၊ အသဲအမဲ
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 5:31 AM0comments
အသက်ရှည်လို့ ၊ ဘုန်းမကြီး
လူ့ စည်းစိမ် သဘာဝ
ကံ အကြောင်း လှ၊
ဘုန်းကြီးပါလို့ ၊ အသက်ရှည်၊
ကျမတို့ ရဲ့ ၊ ချစ်သော အမေ၊
အမျိုးသား စိတ်ဓါတ်၊ ပြည့်ကျိုးမာန်၊
မြေမှန် ရေမှန်၊ မျိုးစေ့မှန်
ထိုးနှက်ခဲ့၊ နယ်ချဲ့ ကိုလိုနီ၊
မဟာဂီတ နဲ့ အထုတ္ထုပတ္တိ။
ဂန္တ၀င်ရေးသည့် သူ၏ စာ။
အမရာနဲ့ မင်းမဟော်သို့ လိုက်ဖက်ညီ၊
ဘာမဆို စွန့် ရဲ
သား တစ်ယောက်ကို စတေး၊
အင်္ဂလိပ်။ ဂျပန်။ အိမ်စောင့်အစိုးရနဲ ၊့
မဆလ။ ငြိမ်ပိနဲ ၊့ နအဖ။
ဘယ်လိုနံမည်ဘဲ၊ ပြောင်းခဲ့ ပြောင်းခဲ့
အမေ့( ၉၂) နှစ်မှာ ကိုယ်စားပြု၊
မသဒ္ဓါ တို့ ရဲ့..ကတိတခု၊
အမေ.လူထုဒေါ်အမာ၏ ကံထူးသော (၉၂) နှစ်ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ မင်္ဂလာအတွက်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 3:19 AM0comments